Izindaba - Yiziphi Izinzuzo Zesistimu Yesikhathi Sokuguquguquka Kwevelufa?
Kusukela kwavela injini, abantu abayekile ukumthuthuzela, futhi sibonile nezizukulwane zezinjini ezintsha ezinokususwa okuhlukahlukene kusuka kokukhulu kuya kokuncane. Ngokwanda kwezimoto, singene enkingeni yamandla esabekayo. , Uwoyela, isisetshenziswa esingavuseleleki, sikhathala kancane ngokumba kwethu kwansuku zonke. Njengabantu besikhathi samanje, asizibheki izingqinamba zamandla noma sigcinele ezinye izisetshenziswa isizukulwane esilandelayo. Ngemizamo yethu yobunjiniyela, sithuthukise uhlobo olusha lwenjini yokonga amandla futhi saletha ubuchwepheshe obuningi bokonga uphethiloli. Namuhla umphakeli we-valve yemoto izokwabelana nawe ngezinzuzo zohlelo lokushintsha isikhathi se-valve.
Ngaphezu kwe-throttle ne-turbine (noma ukwanda komshini), izinto ezithinta umoya ku-cylinder zifaka ama-valve.
Ngokuvamile, i-valve eguquguqukayo ifaka izinhlobo ezahlukahlukene zokuhlukahluka: isikhathi esiguqukayo ohlangothini lokudla, ukuphakama okuguqukayo ohlangothini lokudla, isikhathi esiguqukayo ohlangothini lwe-exhaust, nokuphakamisa okuguqukayo ohlangothini lwe-exhaust. Ezinye izinjini zinenye yazo kuphela, kanti ezinye izinjini zinezikhathi eziningi ngasikhathi sinye. Ngakho-ke, ubuchwepheshe "bokudla okuguquguqukayo" bezinjini ezahlukahlukene abufani ngokuya ngesakhiwo.
Umgomo wokuguquguquka kwesikhathi se-valve
Isimiso esisebenzayo senjini kaphethiloli onhlangothi ezine esijwayelene nayo. Imivimbo emine yokusebenza yokumunca, ingcindezi, ukusebenza, ukukhipha, kanye nomsebenzi oqhubekayo wenjini unomphumela ongenakuhlukaniswa ngesikhathi sokuvula nokuvala sempimpo. Wonke umuntu uyazi ukuthi i-valve iqhutshwa yi-crankshaft yenjini ngokusebenzisa i-camshaft, futhi isikhathi se-valve sincike engxenyeni yokujikeleza ye-camshaft. Enjini ejwayelekile, isikhathi sokuvula nokuvala se-valve yokungenisa kanye ne-valve yokukhipha kumisiwe. Lesi sikhathi esinqunyiwe kunzima ukubheka izidingo zokusebenza zenjini ngejubane elihlukile. Sifuna ukwenza injini ifinyelele ekusebenzeni okuphezulu Imvamisa siguqula i-α yokuthambekela kwe-camshaft ukushintsha isikhathi sokuvula nesokuvala sempimpi ukufeza isikhathi esisheshayo somsebenzi ukukhiqiza amandla amakhulu we-kinetic. Manje sesinesikhathi se-valve esiguqukayo sokuxazulula lokhu kalula. Ubuchwepheshe.
Ubuchwepheshe besikhathi se-valve obuguquguqukayo buyisakhiwo esilula nohlelo lwezindleko eziphansi kulo lonke ubuchwepheshe be-valve timing timing. Isebenzisa izindlela zokudlulisa ama-hydraulic kanye negiya ukulungisa ngamandla isikhathi se-valve ngokuya ngezidingo zenjini. Isikhathi se-valve esiguqukayo asikwazi ukushintsha isikhathi sokuvulwa kwe-valve, kepha singalawula kuphela isikhathi sokuvula noma sokuvala i-valve kusengaphambili. Ngasikhathi sinye, ayikwazi ukulawula ukushaywa kokuvulwa kwe-valve njenge-camshaft eguquguqukayo, ngakho-ke inomphumela olinganiselwe ekuthuthukiseni ukusebenza kwenjini.
Ngokuya ngesikhathi se-valve esiguqukayo, injini ye-HONDA inokuhola okuthile. Lapho injini isebenza ngomthwalo ophansi, i-piston encane isendaweni yokuqala, futhi izingalo ezintathu ze-rocker ziyahlukaniswa. Ikham enkulu nekhamera yesibili zicindezela ingalo enkulu ye-rocker nengalo yesibili ye-rocker ngokulandelana. Lawula ukuvulwa nokuvalwa kwamaphayiphu amabili okudla, i-valve lifting incane, isimo sifana nenjini ejwayelekile. Yize i-cam maphakathi nayo icindezela ingalo ye-rocker ephakathi, ngoba izingalo ze-rocker zihlukanisiwe, ezinye izingalo ezimbili zama-rocker azilawulwa yiwo, ngakho-ke isimo sokuvula nokuvala se-valve ngeke sithinteke.
Kepha lapho injini ifinyelela esilinganisweni esithile sejubane (ngokwesibonelo, lapho imoto yezemidlalo iHonda S2000 ifinyelela ku-5500 rpm ngo-3500 rpm), ikhompyutha izokwala i-solenoid valve ukuthi isebenzise uhlelo lokubacindezela futhi icindezele i-piston encane ku-rocker arm yenza izingalo ezintathu zerocker zivalelwe emzimbeni owodwa futhi ziqhutshwa ikham yephakathi ndawonye. Njengoba i-cam ephakathi iphakeme kunamanye ama-cams futhi inokuphakamisa okukhulu. Izingxenye zemoto injini valve iyandiswa futhi ilifti nayo iyanda. Lapho isivinini senjini siwela esilinganisweni esithile sezivinini eziphansi, umfutho wokubacindezela engalweni ye-rocker nawo uyancipha, i-piston ibuyela esimweni sayo sokuqala ngaphansi kwentwasahlobo ebuyayo, nezingalo ezintathu zama rocker ziyehlukana.
Ngale ndlela, ungalawula ukusetshenziswa kwakho kukaphethiloli ngejubane eliphansi, futhi ngasikhathi sinye uhlangabezane nezidingo zakho zokukhipha amandla kagesi lapho injini ihamba ngesivinini esikhulu. Uhlelo lonke lwe-VTEC lulawulwa yikhompyutha eyinhloko (ECU). I-ECU ithola futhi icubungule imingcele yezinzwa zenjini (kufaka phakathi isivinini, umfutho wokungenisa, isivinini semoto, izinga lokushisa kwamanzi, njll.), Imiphumela ehambelana nezimpawu zokulawula, futhi ilungisa i-rocker piston hydraulic system ngamaphayiphu e-solenoid Ukuze injini ilawulwe amakhamera ahlukene ngejubane elihlukile, okuthinta ukuvulwa nesikhathi se-valve yokudla. Ukuze ukhiqize amandla kagesi onethemba lokuthola.